सजिलो विशेष « Sajilokhabar
पहाडका ग्रामीण सडक अस्तव्यस्तः हिउँदमा धुलो, बर्खामा हिलो
पाँचथर, ९ वैशाख । ग्रामीण बस्ती पुग्ने सवारीमा बर्खा लाग्ने बित्तिकै यात्रुको भीड हुन थाल्छ । खाद्यान्नलगायतका सामग्री गाउँ पु¥याउन भ्याइनभ्याइ हुन्छ । कतिपय गाउँका सर्वसाधारणले वैशाख जेठमै हिउँदसम्म पुग्ने
म एकदिनसमुन्द्रको किनारमा गएउसले मलाई हेर्योर त्यसपछि मैले पनि हेरेतर उसले मलाई बुझेनबिस्तारै बिस्तारै हातले स्पर्श गरेअनि उ मुसुक्क हाँस्योम चाहिँ स्तब्ध भएउ पनि जीवनको एक लयमा चलिरहेको छहावाहुरी तुफान
ओली आफैँ सरकार ढाल्ने कसरतमा !
काठमाडौँ, ६ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको आन्तरिक कलह सुल्झाउन नसकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर,
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर वडाध्यक्ष भएका खनाल कृषि कर्ममा रमाउँदै
इलाम, २६ फागुन । रोजगारीका लागि साउदी अरेबियाबाट फर्किएका इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष गिरिराज खनाल कृषि कर्ममा रमाउन थालेका छन् । उनले कृषि व्यवसायबाट मनग्ये आम्दानी गरेका छन् ।
अतिरिक्त क्रियाकलापले मर्ज हुनबाट जोगिएको विद्यालय
झापा, २१ फागुन । विधालयको समय सामान्यतया विहान १० देखी ४ बजे सम्म हो । तर, झापाको पुर्वोत्तर बुद्धशान्ति गाँउपालिका वडा नं. ६ मा रहेको आदर्श आधारभूत विद्यालयमा ३ः३० बजे
मेरो मृत्यु स्वप्न
मलाई आज आफ्नै तस्वीरमा पुष्प गुच्छा चढाउन मन छ ।निराशाले भरिएका दुई चार शब्द पोख्न मन छ ।शोकाकुल आफ्नै आखाँ रसाउन मन छ ।मलाई मेरै तश्बीरमा हार्दीक समबेदना लेख्न मन
मोरङ-सुनसरी सिँचाइ हस्तान्तरणको ५५ वर्षः अझै पूर्ण भएन
विराटनगर, १८ माघ । सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा मोरङ सुनसरी सिँचाइ आयोजना हस्तान्तरण भएको ५५ वर्षमा पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोशी नदीबाट आयोजनाले सुनसरी र मोरङ जिल्लाको लगभग
राजवंशी समुदायको भाक्कालाई राष्ट्रिय परिकार बनाउन अभियान
बिर्तामोड, ३ माघ । कोचिला गाभुर फ्रन्टले कोच राजवंशी समुदायको भाक्कालगायत खाना परिकारको संस्थागत विकासका लागि सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया सुरु गरेको छ । गाभुर फ्रन्टको केन्द्रीय समितिले परम्परागत खाना
ताप्लेजुङ, २७ पुस । ताप्लेजुङ जिल्लाको तमोरखोला क्षेत्र आदिम लिम्बू जातिको इतिहास बोकेको (मुन्धुम)को उद्गम थलोका रुपमा लिइन्छ । हालको नेपालको पूर्वी भागको लिम्बूवान क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका आदिम मूलवासी लिम्बू
निर्वाचन नहुँदा प्रधानमन्त्रीले ‘खिलराज’ खोज्छन् कि ‘संकटकाल’ रोज्छन् ?
काठमाडौँ, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगैबैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषण गरिएको निर्वाचन हुन्छ भनेर समय र नियतले पत्याउन मुस्किल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा